Iindaba - Joyina izandla zokulwa ubhubhane
Ngo-Matshi 4, 2020, inqwelomoya evela eBrazil yafika ngokukhuselekileyo eShanghai, ithwele iimaski ezingama-20 000 zeFF2 ezinikelwe yiLianhe Chemical Technology Co, Ltd., KwiTaizhou Red Cross. Le yibhetshi yesihlanu yezixhobo zonyango ezinikelwe nguLianhetech ukusukela kwi-COVID-19. Ukuqhambuka kwabantu abangenantliziyo bayathanda, iminikelo yesisa ibonisa uxanduva. Ukuze kuxhaswe ngokupheleleyo ukuthintela kunye nokulawulwa kwe-COVID-19 kunye nokugcina amaxabiso asemthethweni "wokuthatha uxanduva", kwasekuqaleni kukaJanuwari, iLianhetech yaqala ukudibanisa ngokupheleleyo izibonelelo zehlabathi, ngenkxaso-mali yabathengi base-UK nakwamanye amazwe ukuthenga iimaski kunye neempahla zokhuselo zinqabile e-China. Oogxa benkampani basekhaya nakwamanye amazwe, abathengi bokuququzelela ukuthengwa kwempahla, ukuthuthwa, ngesantya esikhawulezayo semaski ezinqabileyo, iimpahla zokhuselo ezibuyela e-China. Nge-8 kaFebruwari, 100,000 iimaski zobuso ezithengwe yiFine Organic Limited, inkampani yaseBritane, yafika e-China. NgoFebruwari 12, iiseti ezili-1,930 zeesuti ezikhuselayo zafika eTshayina, kwathi ngoFebruwari 17, phantse iimaski ezingama-2000 kunye neeseti ezingaphezu kwama-600 zeesuti zokuzikhusela zafika eTshayina. I-FMC yenkampani yaphesheya iye yanceda inkampani ukuba ithenge iisuti zokhuselo ezingama-500 kunye neemaski zobuso ezingama-20 000 ezisuka eDenmark naseBrazil. Ukuza kuthi ga ngoku, uLianhetech unikele ngaphezulu kwe-120,000 iimaski, iiseti ezingama-3,000 zeesuti ezikhuselayo kunye nezinye izinto ezixabisa ngaphezulu kwe-700,000 yuan kwi-Taizhou Red Cross Society. Ingxaki kwicala elinye, inkxaso kuzo zonke iindlela. Musa ukoyika ukuswela izixhobo, kuba yeyam yeyakho ukunxiba iTekhnoloji yeLianhetech iya kuqhubeka nokulandela ukukhula kwesifo kwaye inegalelo ekuphumeleleni umlo wokulwa nobhubhane.